musha nyika dzakabatana Media Hunhu Oprah Winfrey Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yakazara yeGlobal Mtano uyo anozivikanwa kwazvo nezita rekuti ""Mukadzi O ”. Yedu Oprah Winfrey Yemwana Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira nyaya yehupenyu hwake pamberi pemukurumbira, hupenyu hwemhuri / kumashure uye akawanda OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Hungu, munhu wose anoziva nezvemhando yake yakakurumbira yehurukuro yehurukuro kubva ku1986 kusvika ku2011 pamwe chete neyeterevhizheni yake network, OWN. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Oprah Winfrey's Bio iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, titange.
Oprah Winfrey Kuberekwa Nhoroondo Plus Untold Biography Facts:Upenyu Hwekutanga
Oprah Winfrey akaberekwa musi we 29th waJanuary 1954 kuKosciusko, Mississippi, United States. Akazvarwa kuna amai vake, Vernita Lee (musikana wepamba panguva yekuzvarwa kwaOprah) uye kuna baba vake Vernon Winfrey (mugodhi wemarasha uye wekugera).
Mwedzi miviri mushure mokuberekwa kwake, Vernita Lee akatora Oprah kuti ararame nembuya vake amai vake, Hattie Mae kune rimwe guta riri pedyo (kumusoro kwekuberekwa kwake) kwaakapedza makore matanhatu okutanga ehupenyu hwake yakanyura mumabvi muhurombo hwakanyanya.
Nhamba yehurombo yakanga yakanyanya kutyisa zvokuti mbuya vake vakanga vasingakwanisi kumutengesa zvipfeko zvakanaka, rubatsiro rwakamuona iye kazhinji aipfeka magasi akaitwa nesaga ayo akasekwa nevamwe vana.
Zvisineyi, mbuya vake vaive murangi havana kubvumira hurombo kutora huchenjeri hwaOprah nekumudzidzisa kuverenga padiki kwazvo. Mukuwedzera, haana kumborega tsvimbo apo Oprah akazvibata.
Nokudaro, makore matanhatu Oprah akagara nemukumbi weHattie Mae anokwanisa kuonekwa semakore ake akanaka ekugadzira semakore akazotevera achiona achienda kuMilwaukee, Wisconsin kuti agare pasi pekutarisira kwaamai vainge vakabatikana nebasa rake seimba.
Oprah Winfrey Kuberekwa Nhoroondo Plus Untold Biography Facts:Simba rekushungurudzwa kwepabonde
Kukura muMilwaukee, Oprah kushayikwa kwekuchengetwa kwevabereki kwakakanganisa kukura kwake. Akave asingadzoreke kuna amai vake avo vakafunga kuti chinhu chakanakisa kuita kumuendesa kunogara nababa vake kuNashville, Tennessee.
Mwedzi yakati gare gare, akadzokera kuMilwaukee achikumbira naamai vake avo vakabereka hanzvadzi yaOprah. Paive paMilwaukee apo wechidiki Oprah pazera diki repfumbamwe akashungurudzwa pabonde nevanhu vepedyo kusanganisira hama yake, babamunini, shamwari yemhuri uye mukomana waamai vake.
Chiitiko chinotambudza chakanga chisingakwanisi kuti atakure sezvaakanyeverwa pachena kuti arege kubudisa pachena avo vanodzvinyirira. Aine huwandu hwezvakavanzika zvakavanzika akatiza kumba panguva ye13, akava nepamuviri pa14 ndokupa nguva isati yazvarwa mwanakomana akafira nguva pfupi mushure mokunge aendeswa.
Oprah Winfrey Kuberekwa Nhoroondo Plus Untold Biography Facts:Dzidzo Inofambira mberi
Kutora izvo zvakasara pahupenyu hwake hwakaputsika Oprah akadzokidzwa zvakare kuti ave nerwendo kugara nababa vake Vernon Winfrey, muNashville, Tennessee. Vernon akaita basa rakawanda rekufunga nemagariro ekugadzirisa basa kuti aise mwanasikana wake zvakare
Nhanho yakanaka mumutungamiri iwoyo yaimunyorera kuNashville East High School kuti aenderere mberi nedzidzo yake (ainge apedza kudzidzisa chikoro chesekondari ku Nicolet High School kuMilwaukee).
Akaita zvakanaka kwazvo kuchikoro chepamusoro, akashanda muhutungamiri hwakasiyana-siyana hutungamiri uye akatowana mukana wekusangana nemutungamiri wenyika iyo Richard Nixon pasi pemakambani ekudzidzisa vanhu vose pachikoro chake chesekondari.
Oprah Winfrey Kuberekwa Nhoroondo Plus Untold Biography Facts:Simuka Mukurumbira
Kunyange zvazvo Oprah akafambira mberi neChikoro chekuChikoro chepamusoro aive achiziva nezvekufananidzira kwake kune zvinoenderana nevenhau asi akachengetedza zvisarudzo zvakasununguka maererano nekusarudza basa. Nhungamiro inopinda muhupenyu hwake Mugore rake rokupedzisira kuchikoro chesekondari, apo redhiyo yakamuchengetedza maitiro ekuverenga Nhau mukuziva kwehutano hwekupa.
Mwedzi yakati gare gare akapinda mukukwikwidza kwevanhu vose uye akakunda shanduro kuTennessee State University, mubayiro waakashandiswa muTech Communications Communications uye Performing Arts. Kudzidza pajiji yakavhura masuo emabasa ane chokuita nehupfumi paakanga achiri mudzidzi uye apedza kudzidza.
Mukurumbira wakasvibisa musuwo wake kuma1980 paakatora Jobho wepa terevhizheni hurukuro muChicago inonzi AM Chicago. Akabata chiratidziro nehunyanzvi icho chaakatenderwa kuchipa zita zvakare "Iyo Oprah Winfrey Show".
Senguva yakafambira mberi kuratidzwa kwakabva pakukurukura nyaya dzevakadzi dzakakonzerwa nemugovera-kuhwidza kuratidza kuti inogadzirisa nyaya dzinonakidza dzakakonzera vanhu vemarudzi ose, madzinza, uye makore. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Oprah Winfrey Kuberekwa Nhoroondo Plus Untold Biography Facts:Ukama Hupenyu
Kune mumwe munhu akaroorwa zvepabonde uye akabatwa zvisina kunaka pazera duku, mumwe aizoziva kuti kuwana ukama hwakanaka kwaizova basa guru kuna Oprah Winfrey.
Kubva kubva kumwedzi wekuchikoro kwepamusoro, iye aive ari ngoro kana musikana kune vamwe varume. Zvisinei, hukama hwake hunoratidzika kuva hwakaoma sezvo iye achiri ari chifeve kuna Stedman Graham, mutambo wemitambo waakasangana naye mu1986.
Makore matanhatu mushure mekunge vasangana, Oprah akagamuchira chirevo chake chekuroorana uye ivo vakavimbisana nemuchato wakarongwa kuitika munaNovember 1992. Muchato uyu wakakundikana kuuya uye haana kutarisa kuroora, chiitiko chinomuita achiri kukanganisa kumwoyo wake, Stedman Graham.
Oprah Winfrey Kuberekwa Nhoroondo Plus Untold Biography Facts:Upenyu hweMhuri
Baba: Izvo zvichiri kukakavadzana pamusoro pekuti kana Vernon Winfrey, murume uyo Oprah anotaura kuti ndiye baba vake chaizvoizvo baba vake. Iyo nharo inowedzera kuwedzera nekuti nhoroondo dzehuduku hwake dzinoratidza kuti baba vake vakasiya mavhiki mashure mushure mokuberekwa kwake.
Munguva iyi, Oprah akaramba kuedza kuongorora DNA apo inoratidzika sekunakidza kuona Vernon Winfrey (uyo akapa upenyu hwake chinangwa chekutaura kuburikidza nekuisa pfungwa yake pakutanga) sababa vake vechokwadi.
Amai: Amai vaOprah, Vernita Lee aive nehupenyu hwakaoma kurera vana vake nekuda kwemaawa marefu ekushanda asi zvakadaro akakwanisa kuona kutumira Oprah kuti ararame baba vake kwaizove kwakanakira ramangwana rake.
Vanun'una: Kunyange zvazvo Oprah akanga asina ropa reSibling rake, aiva nehafu yevana vababa vake. Tinokuunzirai zvisizvo zvisingazivikanwi pamusoro pavo.
Hanzvadzi yaOprah yekutanga-hanzvadzi Patricia Lyod aive akapindwa muropa necocaine uye akawanikwa akafa mumba make nekuda kwezvinetso zvine chekuita necocaine muna Kukadzi 2003 apo hama yake yeropa Jeffrey Lee akafa muna 1989 kubva kuAids. Aive nemakore makumi maviri nemapfumbamwe panguva yekufa kwake.
Mune 2010 Oprah akawanikwa uye akabatana nehanzvadzi yake yakareba yakarasika hanzvadzi Patricia Lofton. Akanga asingagoni kuisa mufaro wake pakuita izvozvi kuwanikwa.
Patricia akapihwa kurerwa kwemwedzi yekurerwa mushure mekuzvarwa kuti asunungure mutoro wezvemari kuna amai vaOprah. Oprah anga asingazive kuti ane imwe hanzvadzi-hanzvadzi kusvikira asangana naPatricia muna 2010. Kuti aratidze kuti aifarira zvakadii kubatana nasisi vake vakarasika kwenguva refu Oprah akamutengera imba, akamupa mvumo yekuenderera mberi nedzidzo yake pakati pezvimwe zvipo.
Oprah Winfrey Kuberekwa Nhoroondo Plus Untold Biography Facts:Zvematongerwe Enyika
Winfrey akatsigira mukwikwidzi wemutungamiri wenyika, VaBarack Obama, musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2008, kekutanga pavakabvumidza mumiriri wezvematongerwo enyika achimirira chinzvimbo Haana kumira pakungobvumidzwa asi akaenderera mberi nekuronga kutsvaga mari kumushandirapamwe wake.
Sekureva kwevaongorori, kutsigira kwaOprah kwaObama kwaive nemavhoti ari pakati pe420,000 ne1,600,000 yaObama muDemocratic primary chete, zvichibva pamuenzaniso wematunhu asina kusanganisira Texas, Michigan, North Dakota, Kansas, kana Alaska.
Akafadzwa naiye mhedzisiro yakakura yechiitiko chake iye gavhuna weIllinois, Rod Blagojevich akarondedzera Winfrey se "munhu anonyanya kubatsira pakusarudza mutungamiri weBarack Obama", aine "izwi rakakura kupfuura maseneta ese zana akabatanidzwa".
Oprah Winfrey Kuberekwa Nhoroondo Plus Untold Biography Facts:Haisi Kungofanana neTV
Zvakachengeteka kufungisisa Oprah somunhu akabudirira kupamba nyika yevenhau sezvo simba rayo rinotambanudza kunze kwezviratidzo zveTV kuitira kuedza muFirimu kudhinda paIndaneti uye redhiyo. Iye ane nyeredzi uye akaratidzwa mune mamwe mafirimu anosanganisira Iyo Ruvara Pepuru pamwe neiyo firimu Mudiwa.
Uyewo zvakakosha kujekesa pane zvaakabudirira mukudhinda sezvo ane zvinyorwa zvinyorwa kusanganisira memoir yake Upenyu Hwako Unoda nemagazini yacho: O, Oprah Magazini
Kuvapo kwake pamhepo kunonyanya kumiririrwa ne Oprah.com webhusaiti kuti ipe zviwanikwa uye zvemukati zvinofambidzana zvine chekuita nezviratidzwa zvake, magazini, kirabhu yebhuku, neruzhinji rwevanhu apo Chiteshi, Oprah Radio, inozivikanwa nevakawanda vanoita Oprah Winfrey Show uye O, Oprah Magazini.
Oprah Winfrey Kuberekwa Nhoroondo Plus Untold Biography Facts:Rudo Rune Ruchida Nezvemishonga Affair
Zviri pachena kuti hapana chakasara icho Winfrey asina kureurura nezve hupenyu hwake hwehukama kusanganisira kuputa crack cocaine.
Winfrey ainziwo aibatanidzwa mune chimwe chechipiri chine rudo rwehutano hwehutano sezvakataurwa nemunhu wake akazviti aimbova mukomana wekare Randolph Cook uyo akati ivo vakagara pamwe kwemwedzi inoverengeka mu1985 uye vakaita zvinodhaka Mu 1997.
Oprah Winfrey Kuberekwa Nhoroondo Plus Untold Biography Facts:Other Facts
Iye ave achichengeta diary kubvira paaiva 15.
Winfrey anorumbidzwa nekutaridzirwa kwehukama hwepedyo, hwekutaura kwekutaura, izvo zvave zvichinyanya kuonekwa pamashandisirwo emagetsi.
Winfrey akapa inzwi rake kuti aratidze vanhu vane mifananidzo, vachitaura Gussie iyo yega Webhu yaCharlotte, uye Eudora, amai veMuchinda Tiana muDisney The Princess and the Frog, Pakati pevamwe.
Oprah Winfrey ndiye wekutanga mutema musikana bhirionaire uye mukadzi akapfuma muAfrica-America.
Anotaurwa zvakare nevakawanda sevakadzi vakakurumbira munyika.
Vongai nekuverenga kwedu Oprah Winfrey Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
Logan Paul Childhood Story Plus Untold Biography Facts